Fialan-tsasatra: Lohan sy Tarabasov mifalifaly amin'ny nosy Mykonos
Andro vitsy lasa izay nankalaza ny tsingerintaona nahaterahany ilay mpilalao sarimihetsika malaza Lindsay Lohan. Fety roa andro miaraka amin'ny orinasa goavambe maro, miarahaba, milomano ao an-dranomasina, misy alikaola sy sakafo matsiro maromaro natao tao amin'ny nosy Gresy Mykonos. Ny fetibe manontolo dia nokarakarain'ny fofombadiny Egor Tarabasov, izay nanofa trano ho an'ny tenany sy Lindsay nandritra ny fotoana tsy voafetra.
Paparazzi na aiza na aiza misy andian-jiolahy
Mazava ho azy, tsy navela hiditra tao amin'ny trano fialantsasatra ny mpaka sary nalaina, fa raha vantany vao niseho teo amin'ny torapasika teo an-toerana i Lohan sy Tarabasov, dia tsy afaka nijanona ny paparazzi. Raha jerena amin'ny sary izay namely ny Internet, ny mpandraharaha iray sy ny mpilalao sarimihetsika iray dia tsy mitsahatra irery, fa miaraka amin'ny namana iombonana. Mpankafy maro no taitra tamin'ny fihetsiky ny ankizivavy tamin'ny andro nahaterahana, satria nasehon'ireo saripika fa nanomboka nisotro toaka indray i Lindsay, ary nanjavona ny fijeriny. Izany no nosoratan'ireo mpankafy hoe: "Ahoana no nahatongavan'izany? Vao tsy ela intsony izy nisotro toaka, "" Afaka misotro indray i Lindsay, "" Nahoana no i Yegor no mandoa an'io alika io? Te hamono an'i Lindsay ve ianao? ", Etc.
Lohan anefa, toy ny solontenany, dia tsy maneho hevitra momba ny fitondrantenany eo amin'ny sary. Tsy misy fiafarany mihitsy ny fialan-tsasatra tsy misy fiafarany, izay naharitra maherin'ny iray volana.
14 ny kintana kiritika indrindra izay tena sarotra ny miasa
Lindsay Lohan dia very nandritra ny taona maromaro niaraka tamin'ireo mpilalao horonan-tsary
Lindsay dia nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny fangatahana
Vao tsy ela izay, raha nanana peratra nanana emeralda teo amin'ny rantsantanany ilay mpilalao sarimihetsika dia nanomboka nanontany tena ny amin'izay mety ho dikany. Na dia teo aza izany, dia niely ny tsaho momba ny fanekena iray mety, satria nanambara ny mpitondra tenin'ny Tarabasov fa tsy nametraka ny tolo-keviny i Lohan. Na izany aza, nandritra ny lanonana, tamin'ny fankalazana ny faha-30 taonany, i Lindsay dia nanambara tamin'ny fomba ofisialy fa sangisangy voalohany ny tanora.
Justin Timberlake dia nametraka trano iray lehibe ho an'ny $ 8 tapitrisa
Wendi Deng dia nanakorontana ny raharaha niaraka tamin'ny modely 21 taona Berthold Zahhoran
Monica Lewinsky nanoratra lahatsoratra momba an'i Roger Ayles, izay niampanga azy hanao vola
Tom Hiddleston dia afaka manolo an'i Kelvin Harris amin'ny dokam-barotra ny akanjo Armani
Nitaraina nandritra ny herinandro taorian'ny niterahany i Georgina Rodriguez
Eva Longoria dia very maina ary faly ireo mpankafy miaraka amin'ny photoset vaovao!
Ny fiainan'i Selena Gomez manokana tamin'ny taona 2015
Tobey Maguire sy Leonardo DiCaprio
Ny Britney Spears amin'ny akanjo lava fohy dia lasa ilay nahazo ny loka The Hollywood Beauty Awards-2018
Beyonce manafina vantany amin'ny clip video
Kim Kardashian dia nandà tsaho fa handeha hisaraka amin'ny vadiny izy
Ny fomba fanao Zheleznovov
Rabbit, ampiana miaraka amin'ny legioma
Bella Hadid dia manana raharaha miaraka amin'ny mpanao ady totohondry Anthony Joshua
Ahoana ny fomba hanamboarana kitay avy amin'ny gitara?
Cholecystitis - fitsaboana amin'ny fitsaboana amin'ny vahoaka
Ny fanatanjahantena ara-drariny ny ririnina
Belarosiana sy akanjo Belarosiana
Saddle and uterus
Inona no hiandry ny bitro?
Tavoahangy miaraka amin'ny menaka ao amin'ny multivark
Ny fanaintainana ao ambadiky ny loha
Inona no saka entin'ny saka?
Priscilla Presley dia niresaka momba ny fiainana miaraka amin'ireo zafikelikely taorian'ny tantara ratsy tamin'ny sary vetaveta
Ny fitomboana sy ny lanjan'ny Blake Lively
Mety ho ratsy ve ny fitsapana ny bevohoka?
Sakafo ho an'ny olon-dehibe